ကျွန်တော်နှင့် Cryptocurrency ( Henry Aung ) — PALNet
ကျွန်တော်နှင့် Cryptocurrency ( Henry Aung )
kachinhenry in HIVE-MYANMAR •4months ago
မင်္ဂလာပါ။ ယခုတလော Hive platform အပေါ်တက်ကြည့် လျင် Leofinance အကြောင်း ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးများသာ တွေ့နေရသည်။ အခြားသော စိတ်ဝင်စားစရာများ ရှာမတွေ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာရေးရသည်မှာ လက်မတွေ့ ၊ ဘာအကြောင်းအရာ ရေးရမည်မသိ။
Covid အကြောင်းလည်း မရေးသာလိုတော့ပါ။ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သော Motivation ပျောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် ယခုကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်း နေရချိန် အားလပ်ချိန်များ ပိုရနေချိန်တွင် Hive ဈေးများ တက်လာလိုက်လျင် ဘာရယ်မဟုတ် မိမိ Wallet အားကြည့်ကာ အားတက်နိုင်ပါသေးသည်။
ယခုတော့ Hive ကလည်း HF သာပြီးသွားသည် ၊ အီလယ်လယ်နှင့် ကျန်ခဲ့သည်သာ အဖတ်တင်ပါတော့သည်။ ထို့အပြင် Hive platform အား အသုံးပြုရသည်မှာ ယခင်ကဲ့သို့ သွက်သွက်လက်လက်မရှိ သည်က ပို၍ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနေပါတော့သည်။
ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်း ရောက်တော့မည် Cryptocurrency အကျိုးအမြတ်ဟူ၍ Steem ထုတ်ရောင်းလိုက်သည်သာ အမြတ်ထွက်သည်ဟု ပြောလို့ရပါသည်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ Hive ကို အများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါသည်။ မျှော်လင့်စရာလည်း Hive သာရှိပါသည်။
Steemit platform ကတော့ တရုတ်တို့၏ Platform ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ရကာ Steemit အားစွန့်ခွာ ခဲ့သည့် အတွက်တော့ နောင်တမရမိပါ။ အမှန်ဆိုရလျင် ယခုဖြစ်နေသော ပြသနာမှာ မသိစိတ်မှ လက်မခံနိုင်ပဲ မိမိကိုယ်ကို နာကျင်နေရသော ပြသနာဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်အရာအား လက်မခံနိုင်ရသနည်းဆိုသော်... ကျွန်တော်တို့ Hive ကို မျှော်လင့်သည်။ တကယ်တမ်း အောင်မြင်လာသည်က Leofinance ။ အဘယ်မျှလောက်အထိ အောင်မြင်လာသနည်းဆိုသော် သူ့မိခင် Token ဖြစ်သော Hive ထက် ဈေးအကွာကြီးကွာသွားကာ ထောင်တက်သွားပါတော့သည်။
Hive platform အား အမှီပြုသော Project တခု အောင်မြင်လာခြင်းသည် Hive platform အတွက် အများကြီး ကောင်းပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ မသိစိတ်က ဝမ်းမသာ နိုင်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့တွင် လုံလောက်သော Leo Power မရှိထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ထည့်ရမည် ဆိုတော့လည်း လက်တွန့်မိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့သည် Cryptocurrency အား free သာပို၍ လိုချင်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်၏ ယခင် ဆောင်းပါး များစွာတွင် ထည့်ရေးဘူးပါသည်။ cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်၍ သူများ ရနေ၍ ကိုယ်မရသည်ကို ထိုင်ကြည့်နေရခြင်းသည် အခံရခက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘားမှ မတတ်နိုင်ပါ။ ကံပေးသမျှ ယူရုံသာ ရှိပါသည်။ တကယ်တမ်းဆိုရလျင် Cryptocurrency လောကသည်လည်း ငွေကြေးတခု ဖြစ်သော ကြောင့် ပြင်ပလောကလို ငွေများရာ ငွေလာ သည့် သဘောသာ ဖြစ်ပါသည်။
Blockchain သည် မည်မျှပင် ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ ပုံစံဖြစ်သည် ဆိုစေအုံးတော့... token အများအပြား ပိုင်ဆိုင်ထားသူတို့၏ ဈေးကစား ရာနေရာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် Blockchain နည်းပညာအား အနည်းငယ် နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သော Blockchain နည်းပညာမှာ ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ ဖြစ်ပါသည် ။ သို့သော် Token မထုတ်ပါ။
ဤကဲ့သို့ token မထုတ်သော blockchain နည်းပညာ များစွာရှိပါသည်။ ယခု ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော ဟိုမရောက်သည်မရောက်လူများအား ဒုက္ခပေးနေသည်က ငွေကြေးတရပ် အဖြစ် ဖေါ်ဆောင် ထားသော Blockchain နည်းပညာများသာ ဖြစ်ပါသည်။
Token / coin တို့သည် ငွေကြေး အဖြစ် အသုံပြုနိုင် / ပြောင်းလည်း နိုင်သော ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသာငမ်းငမ်း လိုက်ရှာနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က BTC 1000 ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့သော် ...... သို့မဟုတ် သင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က Eth 10000 ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့သော်.... ယခု အချိန်သည် သင် သူဌေးတယောက် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က BTC သည် $1 ခန့်သာ ရှ်ခဲ့သလို ၂၀၁၆ ကျွန်တော် Eth အား သိချိန်တွင် 4$ သာရှိပါသေးသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်က Cryptocurrency လောကသို့ ဝင်ကာစဖြစ်၍ Ethereum ဘာမှန်းမသိ ၊ LTC ဘာမှန်မသိခဲ့ပါ။
သို့သော် Steem ကို ပုံအောခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ငွေရင်းထုတ်စရာမလို ... စာရေးရုံမျှဖြင့် သူဌေးဖြစ်နိုင်သည်ကိုး။ ဝမ်းနည်စွာပင် Steem အိမ်မက် ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခု Hive အား မျှော်လင့်သည် ။ နာမည်ကြီးလာသည် က Leofinance ။ ကျွန်တော် Cryptocurrency ဖြင့် မချမ်းသာသေးပါ။
သို့သော် ကျွန်တော် Cryptocurrency လောကသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် အကျိုးယုတ်သွားသည်တော့ မရှိသေးပါ။ Hive သည် လည်းကောင်း Leo သည်လည်းကောင်း အောင်မြင်သွားနိုင်သလို ကျရှုံးသွားနိုင်ပါသည်။ တခုခက်နေသည်က ကျွန်တော်ရွေးထားသော Cryptocurrency project များ ဖြင့် သူဌေးမဖြစ်နိုင်သေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Cryptocurrency လောကတွင် ဆက်ရှိနေပါအုံးမည်။
#myanmar #blockchain #cryptocurrency #knowledge #sharing #palnet #leo
4 months ago in HIVE-MYANMAR by kachinhenry
အင်း စလျှောက်ခဲ့မိပြီပဲဟာမို့ အဆုံးထိ ဆက်ပြီး လျှောက်ကြရပါအုံးမည်။
ဟုတ်ပါ့။ အစလုပ်ထားပြီ ဆိုတော့ အဆုံးထိ လျှောက်ရတော့မှာပေါ့။
uthantzin4months ago
မှတ်သားစရာ ကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ်ကိုဟင်က လေ့လာအားကောင်းတဲ့အတွက် အစ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန်ဒလေးတေ တစ်ချိန်တော့ အသေအချာ ရရှိမှာပါလို့ မှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Goodlucky and goodhealthy to you.
အဲဒီတနေ့ကိုပဲ စောင့်မျှော်ပြီး ကြိုးစားနေပါတယ်လို့။
walarhein4months ago
ငဗစ်ကြောင့် ဝင်ငွေ လျော့နည်းနေချိန်မှာ HIVE မှာ
အားခဲ ကြိုးစားရှာရမလား အောင့်မေ့မိပါတယ်။
ခုတော့ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်နေပါရောလားဗျာ
ပညာရှင် မဟုတ်တော့လည်း ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့ ခက်ပါ့။
ကံတရားကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတတ်သည်မို့လည်း ရွေးချယ်ရတာ ခက်လှ။
မည်သို့ပင် ရှိစေကာမူ ယုံကြည်ရာ လမ်း ဆက်လျှောက်ကြပါဦးစို့ဗျာ။
Congratulations @kachinhenry! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :